mercredi, 07 février 2018 22:40
TIKO Andranomanelatra: Savahao nataon'ny JIRAMA nitsirihana halatra jiro
mercredi, 07 février 2018 22:27
Ambohitsirohitra: Fahatsiarovana ny 7 febroary 2009-2018, sivy taona lasa izay
Tonga nanati-boninkazo teny Ambohitsirohitra ireo antoko maro samihafa, anisan'izany ny teo anivon'ny fitondrana, ny Monima, ny MAPAR izay vory lanina hatrany, toy ny isan-taona dia nisy ny hira "Iny lalana iny" natao izay nanomboka teny amin'ny Hotel Le LOUVRE ka hatreny amin'ny tsangam-baton'ireo mahery fo.
Nilamina araka izany ny fanatanterahina izany io maraina io.
mercredi, 07 février 2018 19:51
Campus Ambondrona: Efa manomboka ny asa fanarenana ny tranon'ny mpianatra
Bloc miisa 5 no ezahina vitaina mialohan'ny fanombohan'ny taom-pianarana vaovao eny amin'ny oniversiten'i Mahajanga. Izany hoe efitrano miisa 30.
Efa antitra sy potika avokoa ireo efitrano rehetra ka natao lohalaharana ny fanamboarana satria raha ny oniversite iray manontolo no hoharenina, tombanana ho 51 miliara ariary vao mahavita izany.
Ankoatra ny ministera dia mandray anjara amin'izao fanamboarana izao amin'ny tetibolany ihany koa ny oniversite.
Rehefa vita ny fanamboarana, dia tsy maintsy hisy ny paikady vaovao hitsinjarana ny efitrano ka tsy ny rehetra no hisitraka izany fa amin'ny alalan'ny fandinihana ny toerana misy ny mpianatra tsirairay.
mercredi, 07 février 2018 13:39
« Triple A » Andranomanelatra: Tonga indray ny JIRAMA
Nanao bemidina ao amin'ny orinasaTiko – « Triple A » Andranomanelatra Antsirabe ny Jirama izao maraina izao, milaza ho tsy afa-po ka hanao fanamarinana ny jiro ao amin'ity orinasa ity sy ny trano ao anatiny, izay fivantanan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana rehefa mandalo aty Antsirabe izy.
Nitondra taratasy avy any amin'ny Fitsarana ny Jirama nahafahana namaha ny toerana satria efa nogiazan'ny fanjakana tsy azo sokafana « scellé » io orinasa io nanomboka tamin'ny 12 oktobra 2017.
7 février: Commémoration du carnage à Ambohitsorohitra
Le Fanjakana n’autorise que le dépôt de gerbe au pied de la stèle située devant le palais d’Etat d’Ambohitsorohitra à la mémoire des victimes à la demande de l’association AV7 (Association des victimes du 7 février (2009)).
mercredi, 07 février 2018 09:20
Fantatrao ve: Ny atsasa-karamanao dia omenao ny Fanjakana?
Miasa alatsinainy, talata, alarobia, an'ny fanjakana hitsaboany tena any ivelany ny ampahany, hanaovana week-end etsy sy eroa, carburant sy 4x4, ny alakamisy, zoma ary sabotsy na izay asa tselika ataonao, no anjaranao.
Androany alarobia izany, miasà mafy fa tsy mbola vola ho entinao mody ny androany, fa mbola an'ny Fanjakana, an'i Filoha sy Praiminisitra mpiasanao, nefa ny vata-karamany aza tsy fantatrao.
Ny hetra-ponkotany, sy ireo hetra Jirama sy Kaominina amboniny daholo.
mercredi, 07 février 2018 06:56
Sambava: Vatosoa namidy 3.600.000 Ariary
Teo ampitadiavana mpividy ity voalaza ho vatosoa ity ny tovolahy iray 25 taona eo no tra-tehaky ny Zandary omaly talata 06 febroary maraina tetsy Sambava-Centre.
Tamin’izany no nilazany fa avy any Belambo, Kaominina Antsirabe Nord, Distrikan'i Vohemar no fiaviany. Mbola manana lehibe izay mpaniraka azy izy ka handeha hitady tombony fotsiny aty Sambava.
Amin’izao dia mbola hanaovana famotorana lalina ao amin'ny Zandarimaria Sambava ity nitondra vato milanja eo amin'ny 18g ity, vato tena izy ve sa vato izay entina hanaovana fisolokiana avo lenta indray?